Shanduko yebasa renzvimbo dzekudyidzana muecommerce | ECommerce nhau
Sezvo vezvenhau uye e-commerce zvowedzera kuwedzera kubatikana muhupenyu hwedu, mikana yekuti vapindirane nekusimbisana haigoni kuverengwa, tichifunga kuti munhu wepakati anoshandisa nguva ingangosvika awa nemaminetsi makumi mana achiongorora zvese zvemagariro. Mazuva, uye nhamba ye vatengi vepamhepo muUS vacharova 40 mamirioni gore rino.
Mumazuva ekare, kuvepo kwebhizinesi kwaifananidzirwa nemashambadziro epepanhau uye pamberi pechitoro. Zvino, muzera redhijitari, mukurumbira webhizinesi anorarama uye kufira chinzvimbo chavo pasocial media. Parizvino, vezvenhau vanoshandiswa nemhando senzira yekushambadza, kuwedzera kwavo pamhepo, uye nekupa yepamusoro-soro sevatengi.
Mugore rino, hapana mubvunzo kuti pakupedzisira tinotarisira kuti zvirevo izvi zvichaenderera mberi, sekubuda kutsva. Ngatitarisei nezve iri kukura basa rezvemagariro midhiya mue-commerce.
1 Paid Ads uye Yemagariro Midhiya
2 Yakavanzika meseji
3 Basa riri kukura rezvemagariro e-commerce
3.1 Shambadzira kune dhatabhesi rezuva nezuva
3.2 Iva mupfupi uye mupfupi
3.3 Gadza zvinangwa zvako
3.4 Shandisa zvakanakira akasiyana masocial network
3.5 Shandisa Ongororo
3.6 Mushandisi akagadzira zvemukati
3.7 Svika pakuziva vatengi vako
3.8 Usangoedza kutengesa
4 In-App Kutenga
4.1 Kubhadhara kushambadzira
4.2 Rarama vhidhiyo
4.3 Virtual chokwadi
5 Mifungo yekupedzisira
Paid Ads uye Yemagariro Midhiya
Nenhanho ingangoita isina musoro yekugadzirisa iyo inogona kuiswa mune ye Facebook kushambadzira (zera, jogirafi, zvaunofarira nezvimwe) uye iyo nhoroondo iyo iyo Facebook inogona kumhan'ara mhedzisiro yayo, harisi basa riri nyore kuti mabrands arambe achishandisa Facebook uye mamwe magariro. midhiya kushambadza. Ichowo kukunda kweFacebook, iyo yakasimudza anodarika $ 7 bhiriyoni mukushambadzira muna 2016.
Mhando dzakabudirira kwazvo muna2017 ndedzevaya vanokwanisa kuwedzera kusvika kwavo nekubudirira mukushambadzira kwakabhadharwa pasocial media. William Harris, e-commerce yekukura chipangamazano weelumynt.com, anoti: "Ndinoona kuti mae-commerce brand ari kuisa mari yakawanda kwazvo mukushambadzira kwevanhu, uye ndinofunga maitiro aya anoenderera mberi muna2017 ... hazvina kukwana kungobhadhara Ads paGoogle Shopping. Iwe unofanirwa kutsvaga vateereri vakanaka paFacebook Ads, Instagram Ads uye nekuwedzera uye kwakawanda, paPinterest uye mamwe akabhadharwa magariro enhau. "Zvave kuve nyore kugadzirisa izvi uye kuteedzera kudzoka pane kushambadzira, zvinoreva kuti mamwe marangi anotanga kudaro."
Mumakore achangopfuura, vaongorori vakaona inonakidza uye isingatarisirwe maitiro. Ipo kushandiswa kwenzvimbo dzeveruzhinji dzakadai seFacebook neTwitter kuri kutanga kudzikira, masevhisi epachivande ari kuputika mukuzivikanwa. WhatsApp, Snapchat, uye Facebook Messenger zvikara zvemaapps zvine huwandu hwakakura hwekubatana unomhanya mumabhirioni.
Inoenderana: Mamwe eTop 10 Chatbot Platform Zvishandiso Kugadzira Chatbots dzeBhizinesi Rako
Iko kune vanhu vanoenda, bhizinesi rinofanira kutevera, uye mabhenji anoita nzira yavo mukutumira mameseji kuburikidza ne chatbots. Chatbots, AI hunhu hunogona kutevedzera kutaurirana chaiko, hunogona kupindura mibvunzo nezve zvigadzirwa, kupa mazano uye kugadzirisa zvichemo zvevatengi.
Vatengi vari zvishoma nezvishoma kuswedera padhuze nepfungwa. Sekureva kweVenturebeat.com, 49,4 muzana yevatengi vanosarudza kubata bhizinesi kuburikidza ne24 / 7 message sevhisi pane foni. Mhando dzinenge dziri kumberi-kufunga kana uchitanga kutarisa masevhisi ecathamaran senge yekuwedzera nzira yekuwana vatengi.
Pamusoro pezvo, mazhinji masevhisi ekutumira mameseji ikozvino anopa kusangana kwemari. Kuvhura iyo WeChat, kutaura nemumiriri weyakagadzirwa njere chiratidzo, uye kutenga chigadzirwa usingavhare iyo app kunyangwe kamwe kuri zvachose mukati meiyo mukana wezviitiko muna 2017.
Kunyanya kuoma kutenga kana kuwana chimwe chinhu, kashoma kuti isu tienderere mberi. Izvi zvinotsanangura kuti nei ecommerce saiti inotora nguva yakareba kurodha ine yakakwira bounce mitengo, uye online zvitoro zvine clunky interfaces zvinotengesa zvishoma. Mumwe anogona kutotenga zvigadzirwa kuburikidza ne Instagram, Pinterest uye Twitter. Kamwe Apple Pay zviitiko zvakapararira kugamuchirwa, zvinotyisa kufunga kuti nyore kutenga kwekutenga kuchave - kana iwe ukaona chimwe chinhu chaunofarira pasocial media, kamwe kurova kunozounzwa pasuo rako. Zvikwereti zvinofanirwa kutanga vatanga kuongorora maitiro avanogona kutengesa zvigadzirwa zvavo kuburikidza nesocial media, vachibatanidza yakasimba kushambadzira kuvepo nekutenga kuri nyore maitiro
Basa riri kukura rezvemagariro e-commerce
Zvemagariro venhau vauya nenzira yakareba kubva pakungobatanidza vanhu kuenda mukutamba danho rekusarudza mumabhizinesi ese. Vanhu vakatamira pamhepo, uye vane hushamwari. Uye mabhureki aona shanduko, chokwadi. Pamberi, kuvepo kwebhizinesi kwaifananidzirwa nechitoro chaicho uye kushambadzira mupepanhau. Asi muzera redhijitari, mukurumbira webhizinesi anorarama uye kufira chinzvimbo chavo pasocial media.
Zvemagariro midhiya anokwanisa kutungamira vatengi kune chigadzirwa chitsva kana chibvumirano chakanaka. Asi kwete izvo chete, masocial network anogadzira pfungwa yenharaunda uye inosanganisira vanhu munzira yekutenga. Chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji vanotendeukira kumasocial media kuti avabatsire kutora danho rekutenga uye kuti vangangoita 75% yevanhu vakatenga chimwe chinhu nekuti ivo vakachiwona pasocial media chikuva. Mune zvemagariro e-commerce pane mukana wakakura wevanamuzvinabhizinesi, chete kana zano racho ranyatsosimbiswa. Zvemagariro enhau zvakatamba uye zvichaita chinzvimbo chakakosha mukushanduka kwekutenga pamhepo. Uchishandisa mashandiro enhau enhau mue-commerce
Shambadzira kune dhatabhesi rezuva nezuva
Kuti utange uye kukura nharaunda yako yemagariro, iwe unofanirwa kugara uchinyora zvinonakidza uye zvinonakidza zvemukati. Dzidza kuti ndeipi yakanyanya kunaka kutumira nguva, vateereri vako vanoita sei kune akasiyana marudzi ezvinyorwa, inguvai yezuva ndiyo yakanyanya kunaka kutumira, nezvimwe.
Iva mupfupi uye mupfupi
Vanhu vane nguva shoma uye shoma, saka kuwandisa ruzivo haisi iyo nzira kwayo yekukwezva vatengi. Vape iwo mapfupi uye chete akakosha ruzivo nezve chigadzirwa chingavafarire. Kurumidza uye nyore kunwa ndeye kuhwina-kuhwina mamiriro. Uyezve, wedzera zvimwe zvakanaka zvinoonekwa zvemukati. Iyo posvo inosanganisira mufananidzo kana vhidhiyo ichagadzira makumi mashanu ezviuru zvinodikanwa kupfuura imwe isina iyo.
Gadza zvinangwa zvako
Funga nezve izvo zvaunoronga kuzadzikisa uchishandisa pasocial media. Kuzivikanwa kweBrand? Kuwedzera traffic yako webhusaiti? Wedzera kutengesa? Zvese izvi pamwechete? Ita kuti zvinangwa zvako zviverengeke, kuti ugone kuteedzera mafambiro uye kuyera mashandiro enhau enhau kune rako bhizinesi. Tevedza huwandu hwemasocial media traffic kune yako webhusaiti, iyo nhamba yekufarira, migove, makomenti, nezvimwe.
Shandisa zvakanakira akasiyana masocial network
Iwe uripo mumasocial network, asi hapana zvinoitika ... Edza kushandisa zvese zvakasarudzika maficha anounzwa nemasaiti akasiyana ehukama. Shandisa ma hashtag, tora mukana wekusaina bhatani paFacebook, mhanyisa makwikwi paFacebook, wedzera dzinotengwa Pinterest pini nezvimwe zvakadaro. Zvemagariro e-commerce zvinoreva kugara uchitevedzera maitiro. Pane zvakawanda zvakawandisa izvo zvinogona kukubatsira iwe kuti rako bhizinesi riwedzere kuoneka.
Vanhu vane mukana wekutenga chigadzirwa kana mumwe munhu pamberi pavo akachishandisa uye achichiongorora. Kumbira vatengi kuti vasiye maonero avo pane zvigadzirwa uye varatidze pane yako Facebook peji, semuenzaniso. Aya ongororo achagadzira traffic yemagariro kune rako peji uye nekudaro kuwedzera kutengesa.
Mushandisi akagadzira zvemukati
Mushandisi-inogadzirwa zvemukati iri kumanikidza nekuti inopa vangangove vatengi humbowo hwemagariro hwavari kutsvaga. Zvemagariro e-commerce, zvemukati-zvinogadzirwa zvemukati mugodhi wegoridhe. Vanhu vanofarira kuona zvirimo zvakagadzirwa nevamwe vanhu, vanozviziva ivo pachavo mairi. Kumbira vatengi vako kuti vataure, mapikicha, mavhidhiyo uye vatumire kuti vatange hurukuro.
Kana iwe usingazive vatengi vako, haugone kuburitsa zvemukati zvinofarira uye zvinokwezva ivo. Svika pakuvaziva kuburikidza nemamwe emibvunzo, ongororo kana vezvenhau kuitira kuti iwe ugone kushandisa inoshanda zano nenzira kwayo. Meseji yako inofanirwa kugadzirisa zvaunoda - tsvaga kuti ndezvipi.
Zvakadaro, chinangwa chikuru chekushandisa pasocial media hakusi kutenga. Vanhu vanoshandisa vezvenhau nekuda kwekuda kuziva uye nekuda kwekudyidzana. Saka remekedza izvozvo. Usaite zvinoshanda chete kana iwe uchiedza kutengesa chimwe chinhu. Vanhu vanozovhara uye varege kuenderera kana iwe ukadaro.
Kunyangwe masocial network ari nzvimbo dzekugovana zvinhu pachena, ivo vari kuramba vachiwedzera zvakavanzika. Vazhinji vashandisi vanosarudza kutumira meseji zvakavanzika kana kutaurirana kweboka rakavharwa pane nhepfenyuro yeruzhinji. Vatengesi vanofanirwa kuona kuti kutaurirana nevatengi vanogona uye kunonakidza. Kubatanidza munguva chaiyo nevateereri chiitiko chikuru nekuti vanhu vanovenga mazuva ekumirira mhinduro yeemail. Kunyangwe iwe uine vashandi varipo mune chat kana kushandisa live chat bot, mhedzisiro ichave inogutsikana mutengi uye mukana wekushandurwa. Mune zvemagariro e-commerce, kutaurirana kwakatsetseka kwakakosha.
Nhasi, e-commerce iri kupararira zvakanyanya uye zvakanyanya pasocial media, nekuda kwekuti chikamu chakakwira kwazvo chevanhu vanopedza nguva variko. Kutenga kuburikidza nekushandisa nharembozha kwakajairika, uye maitiro aya acharamba achikura muna 2017. Mamwe masocial network (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter) akashandisa sarudzo yekutenga zvigadzirwa zvakananga kuburikidza neanoshandisa mafoni. Uye vanhu vanoshandisa iwo mukana iwoyo nekuti vanovimba iwo masocial network, vachigara vachidzokera kwavari netariro yekuwana izvo zvinogona kutengwa.
Vazhinji vatengesi vari kuona kukosha uye kukosha kwekushandisa nhepfenyuro mu e-commerce, ndosaka musika wave kunyanya kukwikwidza. Kuzadzikisa mhedzisiro yehupenyu hwakanyanya kunetsa nekuti vanhu vanogara vachiona mameseji kutanga kubva kushamwari, kwete kubva kumabhizinesi uye zvigadzirwa. Mushure mechinguva, iwe unodzidza kuti iwe unofanirwa kuisa mari mukushambadzira, uye kubhadhara kuratidza bhizinesi. Sezvo makambani mazhinji uye akawanda paakatanga kushandisa kushambadzira kwakabhadharwa, mitengo yekushambadzira yakatanga kukwira zvishoma nezvishoma, zvakare.
Isu takanga tatokurukura nezvekukosha kwemavhidhiyo echigadzirwa mu e-commerce. Mune e-commerce yemagariro, ndiyo nzira yakanakisa yekumira, chokwadi. Vhidhiyo iyi inokwezva kutarisisa kwako iwe paunenge uchitarisa, zvirimo zvinokukwezva. Asi, kubvira gore rapfuura, mamwe enetiweki dzemagariro dzakaparura mhenyu vhidhiyo sarudzo. Neichi chimiro, iwe unogona kutepfenyura mhenyu kweanosvika maawa mana. Ichi chimiro chinogona kuvaka chiziviso cherudzi uye kuvaka nharaunda nekukurumidza uye nemazvo. Inogona kushandiswa munzira dzakawanda dzinonakidza uye dzekugadzira - mune inorarama Q&A, chigadzirwa demo, kana kuseri-kwe-zviitiko kuona Nekuda kwemabhenefiti aya, vatengesi vazhinji vari kuishandisa kana kuronga kuishandisa gore rino.
Basa iro chairo uye rakawedzerwa chairo rinotamba mue-commerce rakakura. Virtual chaiyo inopa isingakanganwike yekutenga chiitiko, uye ndosaka ichiwana yakawanda nhamba yekutengesa. Mhando dzinokurumidza kuona maitiro aya.
Zvemagariro midhiya inogona kuve huru mutambo chinja mubhizinesi. Kuti ushandise zvese zvakanaka zvinounzwa newe pasocial media, tanga waita tsvagiridzo yako uye gadzira mhando yemagariro enhau. Uye zvechokwadi, kuisa vatengi pakati payo. Gadzira hukama, kuvaka kuvimba uye hukama hunogara. Kutanga, isa mari muzvisungo, wobva waedza kutengesa zvinhu. Tevera maitiro, dzidza masocial network uye nhau dzavanopa. Zvese zvese zvinogona kuve shanduko huru kune rako bhizinesi, saka edza kuti usarasikirwe nechinhu. Social ecommerce inotora basa rakawandisa rakawandisa, chengeta izvo mupfungwa.
Zvichava zvinonakidza kuona kuti zvese izvi zvambotaurwa zvinotamba sei mune ramangwana rezvenhau mue-commerce.
Iwe unoshandisa sei vezvenhau kutora vateereri vatsva uye varipo kune rako ecommerce bhizinesi? Iwe unoronga kutevedzera aya maitiro? Inzwa wakasununguka kugovana ruzivo rwako, mazano, uye mibvunzo.
Tumira Zuva Nezuva- Kune hwaro uye kukura kwenzvimbo yako yemagariro, iwe unofanirwa kutumira zvemukati nguva dzose kukwezva vatengi vako. Ipa ruzivo rwupfupi, rwechokwadi uye rwakakodzera nezve chigadzirwa kuti ufarire ivo. Tsvagiridzo yezvaiitika, vateereri vanoita kune akasiyana marudzi ezvinyorwa, inguvai yezuva yakanakisa kutumira, nezvimwe. zvakakosha. Izvo zvinotumirwa zvine mufananidzo kana vhidhiyo zvinogadzira 50% zvimwe zvinoda kupfuura imwe isina izvozvo.
Gadza zvinangwa zvako - Nyatsoronga pakuronga zvaunoda kuzadzisa (kungave kuwedzera mukutengesa, kuzivikanwa kwechiratidzo, kuwedzerwa kwetraffic kune yako webhusaiti kana tandem) uchishandisa vezvenhau. Ita kuti zvibodzwa zvako zvienzanisike, kuti iwe ugone kuteedzera kufambira mberi kwekubudirira kwesocial media kune yako e-commerce bhizinesi.
Kuteedzera kweVatengi - Ziva vatengi vako kuburikidza neongororo, vezvenhau, kana emibvunzo kuitira kuti ugone kuita marongero ako nenzira yakakodzera.
Social Media uye SEO- Zvemagariro midhiya uye SEO zvinofambidzana. Kuve neanoshanda enhau midhiya kuvapo zvinoshamisa kunowedzera webhusaiti yako SEO mwero.
Kutsoropodza kwakakosha: vashanyi vanonyanya kukwezva uye vanowanzovimba nechigadzirwa kana mumwe munhu pamberi pavo akamboshandisa uye akaiongorora. Kumbira vatengi kuti vasiye maonero avo pane zvigadzirwa nemasevhisi uye varatidze pawebhusaiti yako. Aya maongororo anotyaira traffic yemagariro kune rako peji uye nekudaro kuwedzera kutengesa.
E-commerce uye midhiya enhau mubatanidzwa wakakwana. Icho chaicho chinoshandura mutambo mumabhizinesi ese. Nekuita midhiya yemagariro chinangwa chakakosha chekutaurirana, makambani anogona kunongedza vateereri vakawandisa, nokudaro achivashandura kuva hwaro hwevatengi.
Kunyanya kuoma kutenga kana kuwana chimwe chinhu, kashoma kuti isu tienderere mberi. Izvi zvinotsanangura kuti nei ecommerce saiti inotora nguva yakareba kurodha ine yakakwira bounce mitengo, uye online zvitoro zvine clunky interfaces zvinotengesa zvishoma. Mumwe anogona kutotenga zvigadzirwa kuburikidza ne Instagram, Pinterest uye Twitter. Kamwe Apple Pay zviitiko zvakapararira kugamuchirwa, zvinotyisa kufunga kuti nyore kutenga kwekutenga kuchave sei. Asi muzera redhijitari, mukurumbira webhizinesi anorarama uye kufira chinzvimbo chavo pasocial media. Ita kuti zvibodzwa zvako zvienzanisike, kuti iwe ugone kuteedzera kufambira mberi kwekubudirira kwesocial media kune yako e-commerce bhizinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Shanduko yebasa renzvimbo dzekudyidzana muecommerce